Coffee mix ကော်ဖီမစ် နဲ့ ကျန်းမာရေး – Mawlamyine Daily
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဆောင်းပါး	 April 30, 2017 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၃၀ ဧပြီ ၂၀၁၇
ကော်ဖီမစ်ကို သုတေသနလုပ်ထားတာ မတွေ့သလောက်ဖြစ်တယ်။ တွေ့ရင်ရေးပါမယ်။ ကော်ဖီထဲမှာပါတဲ့ ကေဖင်းအကြောင်းရေးထားတယ်။ အထားခံအောင်လုပ်တဲ့ဓါတ်၊ အနံ့-အရသာအတွက် ထည့်တာနဲ့ ထုပ်ပိုးစရာတွေကိုလဲ သတိထားရပါမယ်။ ကယ်လိုရီကို တွက်ချက်ရပါမယ်။ အဆီပါဝင်မှုကိုလဲ တွက်ရပါမယ်။ အင်းစတင့် ကော်ဖီမစ် နဲ့ ခရမ်မာ နို့မှုံ့ နှစ်မျိုးလုံးထဲမှာ အဆီပါဝင်မှု များတယ်။ အဆီများတဲ့ဝက်သားနဲ့ ဆတူရှိတယ်လို့ ၂၄-၅-၂ဝ၁၃ နေ့ထုတ် တောက်ကိုရီးယား ဆေးသုတေသနသတင်းမှာပါတယ်။ သုတေသနအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပါမောက္ခ ဟွန် ဂွမ်-တိ ကနေပြောတာက အဲဒီနှစ်မျိုးလုံးထဲမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့မသင့်တဲ့ ပြည့်ဝဆီတွေ ပါနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သွေးထဲမှာ ကိုလက်စထောကို တက်စေပါမယ်။
လေ့လာမှုလုပ်သူတွေကနေ အင်းစတင့် ကော်ဖီမစ် ၁၁ မျိုးနဲ့ ခရမ်မာ နို့မှုံ့ ၁၄ မျိုးကို စမ်းသပ်ခဲ့တာပါ။
• ခရမ်မာ နို့မှုံ့ တွေထဲမှာ ၁၅့၎% ကနေ ၂၈့၅% ပါတယ်။ ၂၅% ဆိုတာ ဝက်သားအဆီနဲ့ဆတူတယ်။ ကော်ဖီမစ် တွေထဲမှာ တမျိုးကလွဲရင် ၁ဝ% ပါတယ်။
• ခရမ်မာ နို့မှုံ့ ၁၂ မျိုးထဲမှာ ပြည့်ဝဆီ ၉ဝ% ပါတယ်။ ကော်ဖီမစ် အားလုံးထဲမှာ ပြည့်ဝဆီ ၉၉% ပါတယ်။ ကြက်သားထဲမှာ ၂၉% နဲ့ အမဲသားထဲမှာ ၄ဝ% ပါတာနဲ့ယှဉ်ကြည့်သင့်တယ်။
• ကိုလက်စထော များသူတွေဟာ နှလုံး-သွေးကြောရောဂါဖြစ်ဘို့ သတိထားကြပါတယ်။
၁၉-၂-၂ဝ၁၄ နေ့ကလာတဲ့ ဘီဘီစီကျန်းမာရေးသတင်းမှာ အစားအသောက်တွေကို ထုပ်ပိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်အကြောင်းကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေသိထားတာ နည်းနည်းလေးသာ ရှိသေးတယ်လို့ ပါရှိခဲ့တယ်။ ကနေ့အထိ အစားအသောက်တွေကို ထုပ်ပိုးဘို့ ဓါတုပစ္စည်းအမယ်ပေါင်း ၄ဝဝဝ လောက် သုံးနေကြပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ လူကိုဝစေတာ၊ ဆီးချိုဖြစ်တာ၊ အာရုံကြောထိခိုက်တာတွေကို လေ့လာဘို့ အများကြီး လိုနေပါသေးတယ်။ ဖေါ်မယ်လဒီဟိုက်ပါနေရင် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ရေအပါအဝင် သောက်စရာတွေထည့်တဲ့ ပလပ်စတစ်ထဲမှာ ပါတတ်တယ်။
1. Caffeine (ကေဖင်း) ရဲ့ဆေးစွမ်းသတ္တိများ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/…/caffeine.html
2. Caffeine in Tea (ကေဖင်း) နဲ့ လက်ဖက် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/…/caffeine-in-tea.h…
3. Coffee and Your Health ကော်ဖီ နဲ့ ကျန်းမာရေး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/coffee-and-your-…
Previous Post ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
Next Post ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့ ရွှေဈေးနှုန်း